म मेरो कर्पोरेट ब्लग कहाँ होस्ट गर्ने?
म मेरो कर्पोरेट ब्लग कहाँ राख्छु?
आइतबार, डिसेम्बर 9, 2007 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
शुक्रवार, एक क्षेत्रीय सम्मेलन पछि, त्यहाँ केही उत्तम नेटवर्किworking थियो र मैले धेरै प्रश्नहरू ल्याए।
म अर्को पटक लामो प्रस्तुतीकरणको लागि धक्का दिँदैछु, र यसलाई थप अन्तर्क्रियात्मक बनाउने आशा राख्छु - यस्तो देखिन्छ कि त्यहाँ सामाजिक कारोबार र ब्लगि theirले कसरी उनीहरूका व्यवसायहरूलाई थप सहयोग पुर्‍याउन सक्छ भन्ने बारे स्थानीय व्यवसायहरूबाट एक ठूलो उत्सुकता थियो।
सब भन्दा साधारण प्रश्न मध्ये एक तपाईंको कर्पोरेट ब्रोशर साइटमा ब्लग थप्ने बारेमा हो। पहिले मलाई यो भन्न दिनुहोस् कि म कहिले सिफारिस गर्दिन बदल्नुहोस् तपाईको ब्रोशर साइट ब्लगको साथ - मँ ब्रान्डको शक्ति, मार्केटि, र प्राकृतिक रुपमा व्यवस्थित वेब उपस्थितिको साथ विश्वास गर्दछु।
कम्पनीहरूले सँधै कर्पोरेट ब्लगको थप फाइदा लिन सक्दछन्, यद्यपि यदि स्रोतहरू (समय र प्रतिभा) अनुमति दिईन्छ र कम्पनीले अनुमति दिन्छ (पारदर्शिता)। प्रश्न यो छ कि कसरी कर्पोरेट ब्लग एक कर्पोरेट वेब साइट मा सम्मिलित गर्नु पर्छ।
मैले ब्लगलाई मेरो कर्पोरेट साइटमा एकीकृत गर्नुपर्दछ वा कतै होस्ट गर्नु पर्छ?
तल्लो रेखा: तपाईको कर्पोरेट वेबसाइटमा ब्लग एकीकृत गर्न तपाईको कर्पोरेट ब्रान्डको साथ अखण्डता कायम राख्नु पर्छ। यसको मतलब यो होइन कि तपाईं ठट्टा गर्न वा पारदर्शि रूपमा लेख्न सक्नुहुन्न ... यसको मतलब यो हो कि व्यक्तिहरूले तपाईंको कम्पनीसँग सामग्री लेख्दछन् जुन यो कर्मचारीलाई लेख्नु भएको छ भन्दा।
परिवार, धर्म, वा राजनीतिमा लेख्ने वा फ्लेमिंग (नकारात्मक लेख्ने) कुनै खास शीर्षकमा तपाईंको कम्पनीलाई कसरी बुझिन्छ भन्नेमा प्रत्यक्ष असर गर्दछ। तपाईंले आफ्नो कम्पनी वा ब्रान्डको सुरक्षाको लागि केहि सम्पादकीय विवेक प्रयोग गर्नु पर्छ।
यदि तपाईंको ब्लग अलग होस्ट गरिएको छ भने, यो व्यक्तिगत ब्रान्डको अधिक हो र लिखित रूपमा केही अतिरिक्त स्वतन्त्रता प्रदान गर्न सक्छ। म तपाईंलाई एउटा अर्कोमा छनौट गर्न जाँदैछु - यो तपाईंमै निर्भर गर्दछ कि तपाईं जनसमक्ष खुलासा गर्न चाहानुहुन्छ। कम्पनी ब्लगको साथ तपाईले आफैलाई सोध्नु पर्छ, "के यो सन्देश मेरो कम्पनीसँग सम्बन्धित छ?"
त्यहाँ छन् खोज इञ्जिनका फाइदाहरू र प्रयोगकर्ता अनुभव तपाइँको कर्पोरेट वेबसाइटबाट तपाइँको ब्लग आन्तरिक रूप बाट अलग फाइदा को लाभ। ग्राहकहरु र सम्भावनाहरु अब कर्पोरेट ब्लगहरु मा शिक्षित हुन थालेका छन् र उनीहरु को लागी खोज।
यदि तपाइँ "कम्पनी नाम ब्लग" को लागी खोजी गर्नुहुन्छ भने, तपाइँको कर्पोरेट ब्लगको नतीजा हुनेछ? कर्मचारीको ब्लग? दुखी ग्राहक? प्रयास गर्नुहोस् र हेर्नुहोस्! यो एक खोजी परिणाम हो जुन तपाईंले स्वामित्व लिनुपर्दछ (र सजीलै गर्न सक्नुहुनेछ)।
म कसरी मेरो कम्पनी साइटमा ब्लग एकीकृत गर्नु पर्छ?
तपाईंको कम्पनी ब्लगलाई तपाईंको कम्पनीसँग सम्बन्धितको रूपमा स्थापित गर्न सब भन्दा सजिलो तरीका भनेको यसलाई ब्लग सबडोमेन वा सबडाइरेक्टरीमा पत्ता लगाउनु हो। URL मा "ब्लग" को प्रख्यातताले यो सुनिश्चित गर्दछ कि यो उपयुक्त खोज ईन्जिनसँग अनुक्रमित छ:
त्योले भन्यो, तपाईंको साइटको होम पेजमा कम्पनी ब्लगको फाइदा उठाउनुहोस्! म अनियमित रूपमा तपाइँको गृह पृष्ठमा ब्लग पोष्टहरू प्रदर्शन गर्दिन, म यसको सट्टा केवल लिंकहरू, लिखित अंशहरू, र लेखकको तस्विर मुख्य पृष्ठको आफ्नै पृष्ठमा मुख्य पृष्ठको सामग्री सामग्रीमा प्रदर्शित हुन्छ।
खोज ईन्जिनले तपाईंलाई एउटा अंशका लागि (डुप्लिकेट सामग्री) दण्डित गर्दैन - तर तपाईं गृह पृष्ठमा लगातार परिवर्तन हुने सामग्रीबाट फाइदा लिन सक्नुहुन्छ।
नोट: तपाईको तस्विर थप्नु कुनै पनि ब्लगको आवश्यक हुनु पर्दछ। यसले स्पष्ट रूपमा यस्तो दृश्य प्रदान गर्दछ कि यो सामग्री हो जुन एक व्यक्ति द्वारा लेखिएको हो र मार्केटिंग वा सार्वजनिक सम्बन्ध सम्पादकीय प्रक्रिया मार्फत स्क्रिप्ट हुँदैन। ओह ... र कृपया निश्चित गर्नुहोस् कि यो मार्केटिंग वा सार्वजनिक सम्बन्ध सम्पादकीय प्रक्रिया मार्फत स्क्रिप्ट गरिएको छैन - जब तपाइँ गर्नुहुन्छ कसैले पनि ध्यान दिँदैन।
तपाईं एक नि: शुल्क, खुला स्रोत समाधान एकीकृत गर्न सक्नुहुन्छ WordPress (लिनक्स-आधारित) वा एक ASP.NET ब्लगि। तपाईंको आफ्नै साइटमा 'ब्लग' डाइरेक्टरी र डाटाबेसको समाधान हो, तर तपाईंको कर्पोरेट साइटको शैलीलाई अनुकूलन गर्ने अनुकूलन विषयवस्तु मार्फत निर्बाध शैली कायम राख्नुहोस्।
यदि तपाइँको ठूलो उद्यम, तपाइँ सायद एक को लागी हेर्न चाहानुहुन्छ कर्पोरेट ब्लगि solution समाधान सामग्री प्रबन्ध गर्न र उचित अधिकतमको लागि यसलाई व्यवस्थित गर्नुहोस् फेला पार्न सकिने खोज ईन्जिनको साथ।
थप पढाइ कर्पोरेट ब्लगि:
किन एक ब्लग? किन एक फोरम छैन?
साधारण कर्पोरेट ब्लगिंग प्रश्न र उत्तरहरू।
कार्यान्वयन गर्दै कर्पोरेट ब्लगिंग रणनीति.
टैग: ब्लगब्लग फोल्डरब्लग सबडोमेनब्लगिंगकम्पनी ब्लगकर्पोरेट ब्लग
थोर श्रोकले इन्टरनेट मार्केटिंग गुरुहरूलाई सताउँछ? नगद Pri १1,800०० र पुरस्कार र पुरस्कारमा
डिसे 10, 2007 मा 11: 12 AM
वेबसाइट देखि ब्लग सम्मको खाडल कसरी पूरा गर्ने भनेर व्याख्या गर्ने उत्कृष्ट पोष्ट। MBO कार्यक्रममा तपाईलाई भेट्न पाउँदा खुसी लाग्यो!
10 डिसेम्बर, 2007 बेलुका 7:44 बजे
मसँग कर्पोरेट वेबसाइटमा ब्लग थप्ने बारे विभिन्न कम्पनीहरूबाट धेरै प्रश्नहरू छन्, तिनीहरूमध्ये धेरैले के लेख्नुपर्छ भन्ने चिन्ता छ।
सबै कुरा लेख्नुहोस्! कर्पोरेट ब्लग पनि रमाइलो हुन सक्छ ... तिनीहरूले अफिस, गपशप, चुटकुले आदिबाट हास्यास्पद चित्रहरू राख्न सक्छन्।
YouTube ब्लगमा एक नजर लिनुहोस् र तपाईंले देख्नुहुनेछ कि उनीहरूले सबै कुरा पोस्ट गर्छन् (यूट्यूबसँग सम्बन्धित नभएको जानकारी पनि)।
डिसे 15, 2007 मा 9: 04 AM
यो निर्णय धेरै कर्पोरेटहरूको लागि दुविधा हो। म एउटा ठूलो प्रकाशन कम्पनीको लागि काम गर्छु जहाँ ब्रान्ड धेरै महत्त्वपूर्ण छ र सम्पादकीय सामग्री सबै कुरा हो। सम्पादकीय सामग्रीको प्रत्येक टुक्रालाई प्रतिलिपि सम्पादन र अनुमोदन गर्न आवश्यक छ र त्यसैले ब्लगहरूको स्वतन्त्र प्रकृति स्वीकार गर्न गाह्रो भएको छ। हामी चाहनुहुन्छ एक एकीकृत ब्लगहरू, तर यी कर्पोरेट ब्रान्डिङ मुद्दाहरूको कारण अपनाउन ढिलो भएको छ र फलस्वरूप केवल केही गैर-एकीकृत ब्लगहरू सिर्जना गरिएका छन्। यो दुर्भाग्य हो।